Manao ahoana ny motera DC 775 - Ikkaro
firosoana >> milina >> Moto mandeha amin'ny herinaratra >> Milina 775
ny Motors 775 dia motera mivantana ankehitriny ampiasaina amin'ny tetikasa maro ary heveriko fa tsy dia fantatry ny olona loatra.
Rehefa miresaka momba ireo karazana motera ireo isika, ny 775 dia manondro ny haben'ny motera izay mahazatra. Amin'izany no ahitantsika ny 775 vokarin'ny marika isan-karazany, miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny hery sy ny hery samihafa, miaraka amina bearings 1 na roa. Fa ny hajain'ny rehetra dia ny haben'ny motera.
Ny hevitro dia ny hividy motera 2 borosy. Iray amin'ireo 12V, miaraka amin'ny tilikambo kely kokoa saingy revolisiona maro izay tiako hampiasaina hanaovana blower ary ilay hitanao amin'ny sary dia biby 288W sy tilikambo be dia be, hanandramana manaova kart kely ho an'ny zazavavy. Saingy ilay iray ho an'ny mpitsoka dia tsy nanana tahiry ary ity iray ity ihany no tonga aty amiko.
Ilay horonantsary nanentana ny fanahiko ho an'ilay mpitsoka
Ka miresaka momba ireo 775 amin'ny ankapobeny aho ary miresaka momba ireo tetikasako manokana.
Motera mivantana izy ireo ankehitriny, saingy misy tanjaka be sy tiro be. Miasa eo anelanelan'ny 6 sy 36 V izy ireo matetika, miankina amin'ny zavatra novidinao izany, miovaova ny elanelam-potoana ary mety handany hatramin'ny 10A ka mitandrema amin'izay ampifandraisinao azy.
Ny refy dia 66,7x 42 mm dia ny haben'ny varingarina ivelany, miaraka amin'ny savaivony 42 mm ary axis 5 mm.
Ity axis ity matetika dia mivoaka 17 mm na dia efa miovaova arakaraka ny mpanamboatra azy aza izany.
Raha ny taham-pamokarana dia azonao atao ny mividy azy boribory na amin'ny D arakaraka ny filanao ao amin'ny tetikasanao.
Misy borosy sy borosy.Ny borosy tsy misy borosy dia mahomby kokoa, saingy tadidio fa tsy maintsy mampiasa mpanera ianao amin'ny asany, raha mandeha kosa ny motera misy borosy mampihatra herinaratra ao aminy.
Motera haingam-pandeha izy ireo, izay mety manomboka amin'ny 12.000 rpm ka hatramin'ny 21.000 rpm.
Tadiavo ny datasheet an'ny maodelin'ny mpanamboatra anao, satria tsy misy datasheet tokana ho an'ny 775 satria motera samy hafa izy ireo ary ny marika tsirairay miankina amin'ny dia hanana toetra sy herinaratra, herinaratra sns.
Mamela ohatra iray ho anao aho, fa ny tokony hataonao dia ny mitady ilay datasheet amin'ilay maodely novidinao. Ho hitanao eo ankoatry ny refin'ny haben'ny motera, ny mampiavaka azy ara-teknika
Ny fividianako dia avy amin'ny marika HANPOSE 775 DC motera 12V 24V 80W 150W 288W Ary araka ny hitanao dia afaka misafidy hery telo samihafa isika. Nahazo ny 3W lehibe indrindra aho
Savaivony ny savony 5mm
Ny haben'ny lavaka M4
Lavaka mihombo 2
Herin'ny motera (W) Volavola kely (V) Maximum Current (A) Torela farany (KG) Hafainganam-pandeha farany (RPM)
Volavola miteraka baolina roa.
Miaraka amin'ny mpankafy mangatsiaka.
Tabataba ambany, fandidiana malefaka
Tetikasa azontsika atao
Raha tsy fantatrao izy ireo dia ho gaga ianao amin'ny habetsahan'ny tetikasa sy famoronana izay azontsika atao miaraka amin'izy ireo. Matetika ireo dia zavatra izay mitaky torque sy hery.
Ilay novidiko ohatra dia 288W
Mamela lisitra misy hevitra aho
Carte, bisikileta elektrika, scooter ary karazana fitaovana hafa misy kodiarana tianay hafindra
Misy ny playlist YouTube natokana ho an'ny fitaovana vita amin'ny motera 775 sy fantsom-pifaninanana PVC ary mahavariana izany
tetikasa iray hafa tiako hatao dia ny kart mini
Inona no hojerena raha hividy 775 ianao
Firy ny maodely maotera hivoaka, jereo ireo zavatra ireo
Raha manana borosy izy na tsy misy borosy
Ny Amps laniny
Raha manana lalao na baolina mangalatra 2 ianao
Amin'ity dia tsy maintsy mandeha milalao ianao ary mampifanaraka ny motera amin'izay tianao ho azo. Ianao ve mila tiro be toy ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra izay mila mihetsika lanjany be na revolisiona be toy ny mpanadio banga?
Manana loharano na bateria ve ianao izay manome ny V sy A takiana tsy misy olana?
Te hanana motera tsy misy borosy mahomby kokoa ve ianao, tantanana miaraka amin'ny mpanara-maso, na zavatra ratsy kokoa azonao fehezina mivantana amin'ny alàlan'ny fanovana ny herinaratra?
Ny zavatra momba ny lalao mitondra raha toa ka mandeha 2 izy ireo satria milamina kokoa
Aiza no hividianana azy ireo
Eny, misy fivarotana an-tserasera maro ahafahanao mividy azy ireo ary tsy miovaova firy ny vidiny. Avelako rohy mankany ianao Amazon, Ebay, Aliexpress y bangood
Ny salanisa eo anelanelan'ny € 8 sy € 13.
Masinina fanaraha-maso isa isa CNC
Sokajy Moto mandeha amin'ny herinaratra Ticket navigation
3 Tetikasa azontsika atao
4 Inona no hojerena raha hividy 775 ianao
5 Aiza no hividianana azy ireo